u-Kohli nama-wrist spinners bayaqhubeka nokucindezela ama-Proteas
u-Virat Kohli uqhubekile nokucindezela abaphosela ama-Standard Bank Proteas kwathi ama-wrist spinners e-India aqhubeka nokuhlupha abashayayo kwiqembu lasekhaya ukunqobisa i-India ngama-runs angu-124 kumdlalo wesithathu we-Momentum ODI e-PPC Newlands ngoLwesithathu.
Umphumela unika i-India ukubangaphambili ngo-3-0 kwimidlalo eyisithupha kwi-series, okushiya ama-Proteas nomsebenzi onzima wokunqoba imidlalo emithathu esele, kuqala nge-PinkDrive ODI e-Bidvest Wanderers Stadium ngoMgqibelo, ukulongana kwi-series.
u-Kohli ushaye ikhulu lakhe lesibili kwi-series – engaphumanga washaya ama-runs angu-160 (159 balls, 12 fours, 2 sixes) – ukuhlanganisa umphumela we-India ongu-303/6 futhi manje une-aggregate kanye ne-average engu-318 kwi-series kanye ne-strike rate esiphezulu ko-90. Kunzima ukucabanga ukuthi angenzani ukuthola izinombolo ezingcono kunalezi.
Ukunconwa kumele kuye nakumdlali ovula umdlalo u-Shikhar Dhawan, naye oshaye o-four abangu-12 endleleni yakhe yokuthola u-76 emabholeni angu-63 oshaye no-Kohli bathola i-partnership yama-runs angu-140 nge-wicket yesibili.
Emuva kwalokho, kube umdlalo ka-Kohli njengoba ethole ama-runs angu-101 kulawo angu-162 atholwe i-India kulandela ukuphuma kuka-Dhawan. Kwizibalo ezincomekayo, u-Dhawan no-Kohli bashaye o-four abangu-24 no-six ababili phakathi kwabo lapho kuyona yonke i-innings ye-India kubalwa o-four abangu-25 no-six abathathu.
Ama-Proteas adlale kahle kabili kumdlalo, okokuqala ngesikhathi u-Kagiso Rabada ekhipha u-Rohit Sharma ngebhola lokugcina kwi-over yakhe yokuqala, okunike umdlali omusha u-Heinrich Klaasen ukunqaka kwakhe kokuqala kwibhola lesithupha evimbile.
u-Rabada, obe ne-spell esihle ngebhola elisha, ukhuphule umoya kuma-Proteas ngesikhathi ethole i-lbw appeal ephumelele ephosela u-Kohli kwi-over yakhe yesibili. Ukapteni we-India, obengakawatholi ama-runs kunama-runs amane nje kuphela, waphunyuka njengoba isinqumo sokuthi uphumile siguquliwe nge-review.
Okwesibili kulandele ukuphuma kuka-Hashim Amla ekuqaleni kwe-innings yabo ngesikhathi u-Aiden Markram no-JP Duminy behlanganise ama-runs angu-78 nge-wicket yesibili ukulinganisa womabili amaqembu nge-run rate emuva kwama-overs angu-15.
Kodwa konke kushintshile ngebhola lesibili le-over yesi-16 ngesikhathi u-Kuldeep Yadav ehlasela futhi waphuma ngokuba-stumped u-Markram emdidisa emoyeni.
Nokho u-Duminy uqhubekile wathola u-50 (51 off 67 balls, 4 fours), u-Yadav naphosa naye nge-spin, u-Yuzvendra Chahal, usonte abashayayo kuma-Proteas, baqeda benama-wicket amane umuntu emunye.
u-Yadav uphose kahle kakhulu ngokulawula i-length kanye ne-flight ngokuphosa kwakhe.
Bobabili sebethathe ama-wicket angu-21 phakathi kwabo kuma-overs angu-52.2 kwi-series kuze kube yimanje futhi kumdlalo wesibili kulandelana ama-Proteas akhishwe ngaphakathi kwama-overs angu-50, i-powerplay yokugcina engasebenzanga futhi okokuqala ama-Proteas okuzomele bakubheke ukushaya ama-overs angu-50.
Ngasekuphoseni, u-Rabada no-Chris Morris baphose kahle kwathi u-Duminy wadlala ngokuphelele wathatha ama-wicket amabili futhi waphosa ama-overs akhe aphele angu-10.
u-De Kock uphume amasonto amabili kuyela kwamane elimele isihlakala Ama-spinners e-India akhipha ama-Proteas babahlule kakhulu u-Markram ufakwe njengokapteni kuze kuphele i-ODI series uKohli uhole umjaho we-India ngekhulu elihle Ama-Proteas ahlosa ukulinganisa iso elilodwa libheke i-World Cup uDuminy ulindele enye i-ODI Series enomqhudelwano u-De Villiers uphumile kuma-Momentum ODI amathathu ngokulimala umunwe Ubuqhawe buka-Amla kubeka ama-Proteas ngaphambili kancane uNgidi no-Zondo babaliwe kwiqembu lama-Proteas lama-ODI Ama-Proteas akhipha i-India kalula kwi-surface ehlolayo u-Du Plessis udumisa ‘okukhethekile’ kumdlalo wama-Proteas